Soomalida Kenya Oo Wali Garan la’a in ay horumariyaan Degaanadooda Sameystaana Garoon Diyaaradeed oo Caalami ah:-(Akhriso) – hareerley
Soomalida Kenya Oo Wali Garan la’a in ay horumariyaan Degaanadooda Sameystaana Garoon Diyaaradeed oo Caalami ah:-(Akhriso)
May 12, 2019 Muhammad	0 Comments
Soomalida Kenya ayaa Garan la’a in Sameystaan Garoon Diyaaradeed Oo Caalami ah si ay ugu maarmaan Garoonka Diyaaradaha Ee Jooma Kenyaata.
NFD waa Gobolka Dowlad Degaanka Soomalida Ee Kenya halkaas Oo ah Gobol ka mid ah Gobolada isu tagey Ee kenya iyagoona halkaasi ku leh Saamiqeybsi ay la wadaan Qowmiyada Keenyaanka kale haddii ay noqoto dhanka Siyaasada iyo waliba dhaqaalaha.
Hadaba maxay tahay Caqabada hortaagan in madaxda Somalida ah ay ka Taliyaan aayaha Gobolkooda iyo waliba horumarintiisa iyadoo aanu aragno in ay darajo ku leeyihiin dhan kasta haddii ay noqoto Barlamanka dhanka Wasiirada,Taliyayaasha Ciidamda Madaxda kowtiyada soomalidu degto waa maxay Caqabadaan ku hor gudban Soomalida uun.
Waxay ila tahay in ay jiraan musuqmaasuq baahsan oo madaxda Soomalidu ku hayaan Goboladooda iyagoona buuxsanya uun jeebabkooda dad iyo duunyana ka dhaqaaqa kuna soo laabta uun xiliyada ay doonayaan in dib loosoo doorto waana musiibada meesha ka jirta,
Ugu danbeyn haddii madaxdu ka shaqeyn lahaayeen horumarka Gobolkooda meysan hoosgaleen keenyaanka kale Maxaa yeeley haddii waxwalba ay u baahan yihiin ku heystaan Degaanadooda Cidna umeysan baahanlaheyn.
← (Maqaal):-Shirka Garoowe ee lagu kala kacay!
Kenya oo shaacisay sababtii ay u joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee Muqdsho & Nairobi →